Music | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
စတုတ္တ တော်လှန်ရေး (လင်းလင်း) 4th Album
အဆိုတော် ကိုလင်းလင်း ရဲ့ လေးကြိမ်မြောက် စီးရီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်မရလို့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့် က နေပြီး ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင် ပါတယ်။သီချင်းလေး ကို နားထောင်ပြီး လို့ ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုရင်တော့ မူရင်းခွေလေး ကို ဝယ်ယူ နားထောင်ဖို့ အတွက်လဲ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖေ နဲ့မမေ နေတဲ့အိမ်
ကျွန်တော် နဲ့ အိမ်ရှေ့ကဂစ်တာ
Bonus Track = ဧရာဝတီ
ဒါကတော့ ဖွင့်နားထောင် ကြည့်ပြီး တစ်ပုဒ်ချင်း ရွေးဒေါင်း နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အားလုံးကို တစ်ခါတည်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
http://www.zarni.info/ မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
Original link - http://www.zarni.info/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 10, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ MP3, Music, မြန်မာသီချင်း
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ အနီရောင် တေးစီးရီး
အခု တလောမှာ နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များ နေတဲ့ နီနီ ခင်ဇော်ရဲ့ အနီရောင် တေးစီးရီးကို နားထောင် ချင်သူများ အတွက် MP3 အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက် ပါပြီဗျာ။
စုစုပေါင်း သီချင်း ၁၂ ပုဒ် တိတိ ပါဝင် ပါတယ်။ အားလုံးကို အဆင်ပြေပြေ ဒေါင်းယူနိုင်အောင် တင်ပေး ထားပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ သီချင်းတွေ ကိုလည်း aအာက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီအောက်ကတော့ တစ်ပုဒ်ချင်း နားထောင်ပြီး ကြိုက်ရာရွေး ဒေါင်း နိုင်ပါတယ်။
ဒီအောက်ကတော့ သီချင်း အားလုံး တစ်ခါတည်း ဒေါင်း နိုင်ပါတယ်။
Original link - http://www.pyaephyo.com/
လူငယ်များကြိုက်နှစ်သက်မယ့် -4Alblum (16ပုဒ်)
4 Alblum မျှော်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက် ပြီနော် Like & Share လေး ၀ိုင်းလုပ်ပေး ကြပါအုန်း။
ဒါကတော့ တစ်ပုဒ်ချင်း ရွေးဒေါင်း ဘို့ပါ။
သီချင်း အားလုံးကို တစ်ခါတည်း ဒေါင်းချင် ရင်တော့ အောက်မှာ ဇစ်ဖိုင်လေးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။
Zaw Thiha Aung
Original link - https://www.facebook.com/zawthihaaung.tennagehacker?fref=photo
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 18, 2015 1 comment:
မျိုးကြီး ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Album ဖြစ်ပါတယ် ကြိုက်နှစ်သက် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
အောက်ကတော့ တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို နားထောင်ပြီး ရွေးချယ် ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
အောက်ကတော့ Album ထဲက သီချင်း အကုန်လုံးကို တစ်ခါတည်း ဇစ်ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
▼ Album ထဲက သီချင်း အကုန်လုံး လိုချင်ရင် ဒီမှာ တစ်ခါတည်း ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ် ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, June 11, 2015 1 comment:
ညာပုံတော် မင်းသားကြီး (ဗမာသီချင်း)
ကဲဗျာ ... ညာပုံတော် မင်းသားကြီးတဲ့ ခင်ဗျ အသစ်ထွက် လာတာနော်
အားပေး လိုက်ကြ ပါအုန်းဗျား ... ဖေ့စ်ဘွခ် ပေါ် ကနေ ဆွဲလာတာ မိုက်တယ် ... ဟီး
- ပန်းပိတောက် သက်သေ ( + တင်တင်မာ )
- ပျော်ပါစေ မောင်မယ်တွေ
- ပိတောက်တစ်ခက် ချစ်လက်ဆောင်
- သိင်္ဂီရွှေဆင်းနဲ့ 
- ချစ်စရာ သင်္ကြန်
အောက်က Box ထဲမှာ တစ်ပုဒ်ချင်း စိတ်ကြိုက်ရွေးဒေါင်း နိုင်သလို ဖွင့်၍ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
zip ချုပ်ပြီး အားလုံးပေါင်း တင်ပေး ထားပါတယ် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
Myanmar Mp3 Album မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 05, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ MP3, Music, New year, မြန်မာသီချင်း
တေးဂီတ – စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင် နှင့် အဖွဲ့
မန္တလေးဒိုး ၊ သန်းမောင်ဝင်း ၊ ဖိုးသား
အသံဖမ်း – တိုနီ (လင်း)
- နှစ်သစ်ချစ်ဦး – ခင်မောင်ထူး
- မညိုမြ – ပုလဲ
- ရေတွေစိုကုန်ပြီ – သန်းနိုင်
- ပန်းမျိုးတစ်ရာ – ဟေမာနေ၀င်း
- ချမ်းပါတယ် – သိန်းတန်
- ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ – မြတ်ဝတ်ရည်
- ပိတောက်လက်ဆောင် – သိန်းတန်
- ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို – ခင်မောင်ထူး
- ရွှေမန်းမာလာ – ခိုင်ခင်ဦး
zip ချုပ်ပြီး အားလုံးပေါင်း တင်ပေး ထားပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 05, 2015 No comments:
၀ုိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိ ခဲ့တဲ့ အတွဲခွေလေးကို အဝေးရောက် မြန်မာတွေ နားဆင်
နိုင်အောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
၀ယ်လို့ ရတဲ့ သူများ မူရင်းခွေ ကိုသာ အားပေး စေချင် ပါတယ်။
<< တစ်ပုဒ်ချင်း ရွေးဒေါင်းရန် >> (ဖွင့်နားထောင်လို့လည်း ရပါတယ်။)
<< Album တစ်ခုလုံးဒေါင်းရန် >>
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 15, 2015 No comments:
ရဲရင့်အောင် - သဝေထိုး ခကွေး ယပင့် (New Alblum) mp3
ရဲရင့်အောင်ရဲ့ သဝေထိုး ခကွေး ယပင့် Alblum လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ သီချင်း ၁၁ ပုဒ် ပါဝင်
အပြုံး (သို့) အရှုံး
Music MP3 Downloader 5.6.4.2
Music MP3 Downloader 5.6.4.2 | 6.62 MB
You can search and download any music you want – over 100 million MP3 from the largest download network.
Music MP3 Downloader is notaPeer-to-Peer program. You don’t have to worry about downloading virus. It is clean of any form of badware (viruses, spyware, adware, etc.)
Home Page : http://www.music-mp3-downloader.com/
ကဏ္ဍ Download-Manager, MP3, Music
လရောင်အောက်ကပြာသိုနှင်း - မိုးသက်နိုင်
Released: Jan,01 2014
Download Album - Size: 127 MB
▼ zippyshare ▼ OR ▼ shared ▼ OR ▼ solidfiles ▼
မင်းအောင် - ချစ်သင့်မှချစ်
မင်းအောင်ရဲ့ ချစ်သင့်မှချစ် အခွေရဲ့ သီချင်တွေပါ။
နားဆင်ဖို့ နဲ့ သိမ်းထားနိုင်ဖို့ ......အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
▼ my.pcloud ▼
Credit : ဖြူနီပြာဝါတေးသံသာများ
ပန်းအိဖြူ - ချစ်သူ အလွမ်းတေး
ပန်းအိဖြူရဲ့ ချစ်သူအလွမ်းတေး အခွေရဲ့ သီချင်တွေပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, November 20, 20142comments:
သန်းမြတ်စိုး - တိမ်ဦးလေပြေ မောင့်ကိုစေ
သန်းမြတ်စိုးရဲ့ တိမ်ဦးလေပြေမောင့်ကိုစေ အခွေရဲ့ သီချင်တွေပါ။
နာမည်ကြီး မီမီဝင်းဖေ ရဲ့ ဖလင်ပေါ်က သီချင်းများ အခွေ။
အောင်ခြင်း ရှစ်ပါး ဗုဒ္ဓဓမ္မတေး တီးလုံး ဆန်းများ
နာမည်ကြီး ဗုဒ္ဓ ဓမ္မတေး တွေကို ခေတ်ပေါ်နဲ့ ရောစပ်ပြီး တီးခတ်ထားတဲ့ အခွေပါ။ ဖွင့်ထားရင် ကြည့်ညိုစရာ
လဲကောင်း ကျက်သရေ မင်္ဂလာလဲ ရှိလှ ပါတယ်။
ငယ်ကြိုက်တေးများ = ဗိုဟိန်း
၀၁ ။ ကိုယ်ရယ် မင်းရယ် ပိတောက်ရယ်
၀၂ ။ အချစ်တစ်ပွဲ စစ်ပွဲတစ်ရာ
၀၃ ။ ထမီတိုတို နှင်းစိုစို
၀၄ ။ မျှော်ရပါကြောင်း နွေမိုးဆောင်း
၀၅ ။ အမေဆူရင် ငါ့ဆီပြေးခဲ့
၀၆ ။ မှာချင်တယ် မေမလွမ်းနဲ့
၀၇ ။ ကွမ်းတောင်ကိုင်လေး ကိုယ့်ချစ်သူ
၀၈ ။ ချစ်သည်းဘယ်ခါ ရှိပါ့မယ်
၀၉ ။ အချစ်ဟောင်းနဲ့ နှောင်းပုံပြင်
၁၀ ။ ချစ်မိဝန်
မင်းအောင်ရဲ့ ဂုဏ်မြင့်သူ လှည့်စားရက်တယ်
မင်းအောင်ရဲ့ ဂုဏ်မြင့်သူ လှည့်စားရက်တယ် သီချင်းအခွေလေး တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်သူများ နားဆင်ဖို့ နဲ့ သိမ်းထားနိုင်ဖို့ ....အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
VA - နှလုံးသားလေးထဲမွေးဖွားခွင့်ပြုပါ [Album] (MP3-320Kbps) (2014)
▼ zippyshare ▼ OR ▼ googledrive ▼
Special thanks @itburma MHitz
VA - Shwe FM 5th Anniversary [Album] (MP3-128kbps) (2014)
Album: Shwe FM 5th Anniversary
01. တစ်ဖက်သက် - စိုင်းစိုင်ခမ်းလှိုင်
02. လူတွေကြားကတို့နှစ်ယောက် - လင်းလင်း+ချစ်သုဝေ
03. Bad Boy - နီနီခင်ဇော်
04. အရေးကြီးတယ် - အမွှန်း၊ ဝိုင်းလေး၊ လိမ္မော်သီး
05. မယ်ခုမျှော် - သားစိုး၊ ထိုက်ထိုက်
06. အရင်တိုင်းပဲ - ဝေလ
07. မောင် - မေဆွိ
08. သနားတယ် - Red Lip Girls
09. အတူတူရှိရင် - နန်းဆုရတီစိုး
10. အမှတ်တရ - ဝန၊ လင်းယုန်၊ သားဒီလူ
11. အသက်ထက်နှင့်အတူ - အစိုင်း
12. ဘယ်သွားနေလဲ - အိမ့်ချစ်
13. ကော်ဖီပူပူလေး - ခေမီကို
14. အရုပ်မ - ဟိန်းသစ်၊ ရွှေထူး၊ ထက်ယံ
15. လျှော့မတွက်နဲ့ - ဝါဆိုမိုးဦး